Ama-craters of the Moon .....
Umbuzo Ama-craters of the Moon .....
2 iminyaka 1 iviki eledlule #696 by PAYSON
Enye yezinto ezintsha ezilandwayo ezibukwayo, ama-Craters of the Moon, kwenziwe kahle kakhulu. Ngiphila e-Idaho, nje nge-100 noma ngamamayela ukusuka kulo ..... OKUKHULU!!!! Uma ngabe ilungu le-JUMBO futhi unesikhala ku-hard drive yakho, zama. Kuyafaneleka ngempela. Uma ungenayo i-akhawunti ye-JUMBO, kungathatha ukulanda isikhathi eside kakhulu. Kodwa, konke lokho eceleni, kupholile.